Ujoyine iCeltic emahoreni angu-24 ‘olaxaze iqembu emsakazweni’ | News24
Ujoyine iCeltic emahoreni angu-24 ‘olaxaze iqembu emsakazweni’
Cape Town - IBloemfontein Celtic isiphothule isivumelwano esisheshayo nalowo obengumqeqeshi wePolokwane City, uLuc Eymael.
Lo mqeqeshi oneminyaka engu-57 ubudala usule kuPolokwane City esikhathini esingaphansi kwamahora angu-24 esedlule ngesikhathi etshela umethuli wezinhlelo zezemidlalo kuMetro FM, uRobert Marawa, ukuthi useyashiya kuleli qembu laseLimpopo.
Ngokwe-website yale kilabhu, lo mqeqeshi ongowokudabuka ezweni iBelgium usesayine isivumelwano seminyaka emibili nohhafu.
“Ngihlangane nomqeqeshi ekuseni (ngoLwesihlanu) kanye nabameli bakhe ukuxoxisana ngokumfuna kwethu futhi ngemuva komhlangano ovulelekile sivumelene (ngemuva kwesidlo sasemini) futhi uzibophezele ekujoyineni iqembu,” kusho ummeli wale kilabhu, uMandla Tshabalala.
OLUNYE UDABA: I-SAFA inqabe ukunxephezela uMashaba ngo-R4.1m
Lo mqeqeshi uzwakalise ukujabula ngokujoyina iqembu alichaze ngokuthi ngelihamba phambili esigabeni sePremiership.
“Ngijabule ngokujoyina iqembu elikhulu kangaka futhi elinokusekwa okukhulu,” kusho u-Eymael.
“Ngesikhathi ngifika okokuqala ezweni, ngaba nakho ukulithanda iqembu ngenxa yentshisekelo kanye nokuzinikela okukhonjiswa abalandeli futhi ngithembe, nami ngikulangazelele ngendlela efanayo ukuwina,” kusho u-Eymael.
“Sengike ngalibuka iqembu ngaphambilini futhi sengibone abadlali abahle ngendlela exakile abadinga nje ukugadwa nokugqugquzelwa ukuze baqale ukuwina futhi.”
Lo mqeqeshi osanda kuqokwa uzobe eseRustenburg nalapho ezobe ebukela khona iqembu lidlala neBuya Msuthu emqhudelwaneni weNedbank Cup kusasa (ngoMgqibelo).
Lo mdlalo uzoqala ngo-15:00 ntambama.